Guddiga ACMD: Qaadku waa fasaxan yahay - BBC Somali - Aqoon Guud
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Janaayo, 2013, 18:45 GMT 21:45 SGA
Guddiga dowladda Britain ay u xil-saartay inay ka soo talo-bixiyaan istimaalka Qaadka ee dalkan Britain ayaa soo jeediyay in aan laga mamnuucin Khaadka dalkan UK.
Qaadka dalkan la keeno waxaa inta badan cuna Soomaali, Yemeni iyo Itoobiyaan
Guddiga maandooriyeyaasha sida khaldan loo isticmaalo ee dowladda Britain ay u xil-saartay inay ka soo talo-bixiyaan istimaalka Qaadka ee dalkan Britain ayaa soo jeediyay in aan laga mamnuucin Jaadka dalkan UK.
Guddiga ayaa baaritaan uu ku sameeyay waxyeellada Qaadka ee saameynta jireed ee shaqsiga iyo bulshada waxa uu ku oggaaday in aan wax caddeyn ah loo heyn in dhibaato caafimaad darro ah isticmaalkiisu leeyahay.
Guddiga oo uu hogaamiyo Professor Les Iverson ayaa sheegay.
In baaritaan balaaran oo la sameeyay lagu heli waayay cadeeymo ku filan in Jaadku uu caafimaad ahaan ama bulsho waxyeello geysto, si looga joojiyo dalkan UK.
Guddigu waxa uu dhageystay walaac bulshada ka yimid iyo talooyin ay soo jeediyeen masuuliyiinta deegaanada iyo booliiska oo muddo dheer iyagu arrintan ku mashquulsanaa.
Qof Qaad cunaya
Warbixintan oo ay maalgelisay wasaaradda arrimaha gudaha, waxay ka dambeysay welwel laga muujiyay isticmaalka Qaadka.
Waxaana ay soo jeedisay afar talo:
Maqaamka sharciga ah ee Qaadka ma ahan in la beddelo. Mana ahan in la hoos keeno xeerka si xun u isticmaalka daroogada.
Wasaaradda caafimaadka ee dalkan waa inay Qaadka ku darto waxyaabaha deegaanka looga baahan yahay.
Madaxda degmooyinka iyo booliiska iyo hey'adaha ka hortagga dembiyada waa inay la macaamilaan bulshooyinka iyagoo adeegsanaya tasiilaadka la heli karo si wax looga qabto wixii welwel ah ee laga qabo isticmaalka Qaadka inay keeneyso dhibaato bulsho.
Qaadka waa in lagu daro waxyaabaha laga bogsan karo, isla markaana hey'adaha sharci fulinta ee addeegyada caafimaadka dadweynaha, kuwa caddaaladda iyo booliiska iyo ka hortagga dambiyada ay sameeyaan aasaaska wixii cilmi baaris mustaqbalka la sameynayo.